အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က John Hopkins တက္ကသိုလ် လက်အောက်ခံ Brookings Institute မှာ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်က ပြုလုပ်စဉ်
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Priscilla Clapp- Brookings Institute က ဧည့်ပါမောက္ခ Lex Rieffel အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Anoop Singh နဲ့ အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွါးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ Frances Zwenig တို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ IMF ရဲ့ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Anoop Singh ကတော့ စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ တိုးမြှင့်သုံးစွဲဖို့လိုသလို၊ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့မူဝါဒ ပြောင်းလဲရမယ်လို့ ဆွေးနွေးပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော်က တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
The agricultural sector and uplifting Myanmar peoples' living standard are two separate issues.
This is what we have to learn how USA and West approachacountry so that they will havealeast resistance for their future investments.
Buildagood image for the country first, and then invest other profitable things later with less competition.
Mar 01, 2013 03:25 AM
That is so right. The govt should know that Burma, as an agricultural country, should right now invest more in the agriculture sector to earn more income.
Feb 27, 2013 08:54 AM